Fieferana Avaradrano : Tokantrano 12 voatafika, voaolana ny zaza amam-behivavy – Midi Madagasikara
You Are Here: Home → Faits-Divers → 2019 → mars → 13 → Fieferana Avaradrano : Tokantrano 12 voatafika, voaolana ny zaza amam-behivavy
Fieferana Avaradrano : Tokantrano 12 voatafika, voaolana ny zaza amam-behivavy
Redaction Midi Madagasikara 13 mars 2019 2 Comments
Nandravarava tanteraka ny andian-jiolahy tetsy Soamanandray ao anatin’ny kaomina Fieferana, distrikan’Avaradrano, ny alatsinainy alina lasa teo. Tokantrano am-polony teo no lasibatra, olona roa no naratra ary vehivavy mpianaka no nampiharan’ireo jiolahy no filan-dratsiny. Amam-tapitrisany any ho any kosa ny teti-bidin’ireo zavatra very.
Araka ny fitantaran’ireo niharam-boina, dia tokony ho tamin’ny 10 ora alina eo ireo olon-dratsy no tonga nanafika ny tananan’izy ireo. « Maromaro ireto farany, hoy ny filazan’ny raim-pianakaviana isan’ireo voatafika tany an-toerana. Ary samy nirongo fitaovam-piadiana mahery vaika avokoa izy ireo ». Raha ny voalazany, dia niezaka nanohitra ireto mpanani-bohitra ireto ihany ireo fokonolona saingy tsy nahahovoka firy noho ny hery tsy mitovy. Hany ka nanao izay danin’ny kibony teo an-tanana. Manodidina ny tokantrano 12 teo ho eo no voatafika tamin’io fotoana io. Nisy tokantrano iray niharan’ny mafy indrindra tamin’ireo, hoy ny fanazavana azo. Tsy vitan’ny nalain’ireo jiolahy mantsy izay zavatra sarobidy tao aminy, fa mbola nampiharan’izy ireo ny herisetra ihany koa ny tao an-trano. Teo imason’ny raim-pianakaviana mihitsy mantsy no naolan’ireo tsy matahotody ny reniny sy ny zanany vavy. Ary tsy izay ihany fa mbola nodarohan’izy ireo ihany koa ity raim-pianakaviana ity. Rehefa azon’ireo olon-dratsy izay nilainy, dia nitsoaka nandositra izy ireo nony avy teo. « Niezaka niantso vonjy ihany izahay, saingy ny somary nampalahelo sy mampitaraina anay fokonolona dia adiny roa taty aorian’ny fanafihana vao tonga ireo mpitandro filaminana. Inona intsony moa ny famonjena vita amin’izany, fa dia maratra izay maratra ary voaolana izay voaolana. Efa nadio ela ny rano nitan’ireo mpanafika » hoy hatrany ity raim-pianakaviana ity. Na izany na tsy izany dia efa nisy fanenjehana sy ny fikarohana ireto olon-dratsy ataon’izy ireo. Marihana, fa sivy kilaometatra monja miala iny lalam-pirenena fahatelo, mitsofoka eo Ankadikely Ilafy no misy ity tanana noravan’ny dahalo ity.
Fastar 14 mars 2019 at 17 h 53 min · Edit
Mba mandry ve ny sainareo mpitandro filaminana raha adiny roa aty aoriana ianareo vao tonga hamonjy voina amin’ny lalana 09 km sa tsisy fitaovana koa ve?
ramakavelo tahiana 13 mars 2019 at 15 h 44 min · Edit
zany foana no mahazo ny vahoaka rehefa mba mila vonjy ,nolzaina ny sasany fa tsy misy solika rehefa mba mila vonjy na tara vo tonga ,inona mo no ilaina ireny poste avancé ireny ,anefa nge eo Ambohitriniandriana mba misy poste avncé ihany e!sady matetika mihitsy mijaly iny faritry ny Comune Fieferana iny misy vona na fanafihana matetika ,asa raha mba manao tatitra ny Maire mankany an ireo manampahefana ,ohatrahoe solombavambahoaka na Genderme sns ,afaka manontany olona any @ ireo manodidina ny Fieferana ianareo mpanao gazety fa tena marina ireo